Saịtị ahụ, nke Luis Montero Manglano dere
Onye kwuru na ụdị ihe egwu anwụọla? Ọ bụ naanị okwu nke onye ode akwụkwọ dị ka Luis Montero na-abịakwute ya site na iji mmetụ obi erughị ala ya ka anyị niile chegharịa na ọ dị ntakịrị ihe fọdụrụ ịchọpụta n'ụwa a yana ihe anyị ga-achọ ime. Enwere mgbe niile…
Lazarillo de Tormes, nnukwu akụkọ
Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ akwụkwọ akụkọ na-amaghị aha nwere ike ịtọhapụla onye dere ya na nchịkọta nchịkọta na nyocha nke oge ya. N'ihi na e bipụtara laa azụ na 1554, "Ndụ nke Lazarillo de Tormes na akụ na ụba ya na ahụhụ", dị ka a na-akpọ ya n'uju aha ya, nwere ...
Blue Sky, nke Daria Bignardi dere
Ọ bụla oge kemgbe obi mgbawa hapụrụ ihunanya ịhụta oge n'ụlọ ọgwụ mgbaka, dịka nwa onye agbata obi ọ bụla. Na-akọwa na mgbawa obi na-enweghị isi na-ewere akụkụ ọzọ n'aka Daria Bignardi. N'ihi na ọ bụ maka ịwepụ nhụsianya ka ha na-ahapụ na ịnọ jụụ n'ihu eluigwe na ala nke…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji98 Ọzọ →